Hevitra hanovana ny atiny ho lasa mpanova | Martech Zone
Hevitra hanovana ny atiny ho fiovam-po
Alatsinainy Oktobra 14, 2013 Alahady Oktobra 13, 2013 Douglas Karr
Raha mbola tsy naheno ianao ion interactive, tokony hijery azy ireo tokoa ianao. Tsy vitan'ny hoe manana rindrambaiko miorina amin'ny tranokala mahafinaritra izy ireo amin'ny famoronana sy fitsapana ny traikefa an-tsambo mahomby, fa manome data sy fanohanana an-taonina sy fomba fanao tsara indrindra ho an'ny orinasa koa. Miresaka amina hetsika marobe manerana ny firenena ihany koa izy ireo ary manome atiny lehibe hatrany. Tsy hafa io infographic io:
Fanondroana haingana amin'ny fanaovana ny ankamaroan'ny atinyo miaraka amin'ny pejy fiantsonana. Mampiseho paik'ady sivy tsy manam-paharoa ny infographic amin'ny fanodinkodinana bilaogy, taratasy fotsy, infografika ary slide slide ho an'ny taranaka mitarika.
Liana amin'ny famakiana bebe kokoa? Misoratra anarana handray pejy fitobiana 15 pejy an'ny ion ho an'ny boky Idea Marketing Marketing. Midira antsitrika lalina kokoa amin'ireo tetika 9 voarakitra ao amin'ny infographic amin'ny .pdf azo ampiasaina.
Tags: hevitra marketing amin'ny atinyfiovam-ponyIonion interactivefoto-kevitra momba ny pejyhevitra momba ny pejypejy pejykarazana pejy fitobiana
Ny marketing ara-tsosialy dia mitaky finday mieritreritra
Powtoon: mamorona horonan-tsary sy fampisehoana an-tsary